काम गरेको त देखाउनु त पर्यो नि ! - Everest Dainik - News from Nepal
काम गरेको त देखाउनु त पर्यो नि !
काठमाडौं, असार २८ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर काम गर्ने प्रवृत्तिले राजधानीको जोरपाटीले पनि स्थान पाएको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिका जोरपाटी वडा नं.५ स्थित जोरपाटी ओरालोदेखि लामा पेट्रोल पम्पसम्म मुल सडकमा भईरहेको निर्माण कार्य ।
तस्वीरः सन्तोष सुवेदीको फेसबुकबाट ।
याे पनि पढ्नुस जाडोको लागि जोहो गर्दै